Flubanserin ntụ ntụ (167933-07-5) hplc ma98% | AASraw Nwanyi Jiri
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Nwanyi eji / Flibanserin ntụ ntụ
Rating: SKU: 167933-07-5. Categories: Nwanyi eji, Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Flibanserin ntụ ntụ (167933-07-5), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
Flibanserin ntụ ntụ video
Raw Flibanserin ntụ ntụ isi agwa
Usoro Molecular: C20H21F3N4O
Molekụla arọ: 390.4
Esi na-eme ka uzuzu uzuzu
Aha njirimara Flibanserin gụnyere Ectris na Girosa, aha mbụ ya bụ BIMT-17, aha aha ugbu a bụ Addyi.
Raw Flibanserin ntụ ntụ Usage
FDA kwadoro ọgwụ nke Flibanserin 100mg kwa ụbọchị na ụra ala mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ihe omume na-enye afọ ojuju (SSEs) site na nchịkọta site n'ihe dị otu ihe kwa ọnwa tụnyere placebo. Gbanyụọ oge na-abụghị oge ihi ụra nwere ike ime ka ọbara mgbali elu gị dịkwuo elu, ịda mbà (enweghị uche), mmerụ ahụ na mberede.
Ịdọ aka ná ntị na Flibanserin ntụ ntụ
Flibanserin abụghị maka ọgwụgwọ nke HSDD n'ime ụmụ nwanyị ndị na-agabiga na mụọ ma ọ bụ ụmụ nwoke, ma ọ bụ iji melite arụmọrụ mmekọahụ. Ma ọ bụghị maka ụmụaka.
A malitere ịmalite Flibanserin dị ka onye na-egbochi ọgwụ mgbochi tupu e weghachi ya maka ọgwụgwọ HSDD. Mmetụta dị n'akụkụ Flibanserin bụ nrịzigharị, ọgbụgbọ na-eme ihe dị ka okpukpu atọ ma ọ bụ okpukpu anọ karị na ụra, na-enwe ike gwụrụ.
Flibanserin Powder Powder
Raw Flibanserin ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Flibanserin ntụ ntụ si AASraw